Fivoriam-bidy mora mihetsika ho an'ny motor 3 phase ho an'ny vidin'ny varotra
variable frequency drive for 3 phase motor amidy
Raiso ny fifanarahana tsara indrindra amin'ny fivarotana hafainganam-pandeha variable.
AC Drives | Vokatra hafa matetika | VFD | Inverter
Ny hivezivezy hafainganam-pandeha miovaova (VSD), antsoina koa hoe haingam-pandeha haingam-pandeha (ASDs) azo ovaina, dia fitaovana izay mety hanova ny hafainganam-pandeha mivezivezy mahazatra. Ny familiana haingam-pandeha mety vita (ASD), fantatra ihany koa amin'ny fametahana hafainganam-pandeha (VSD), dia mamaritra ny fitaovana ampiasaina hanaraha-maso ny hafainganam-pandeha. Ny fizotran'ny indostria maro toy ny tsipika fivoriambe dia tsy maintsy miasa amin'ny hafaingam-pandeha samihafa ho an'ny vokatra samihafa. Ny fiara mitondra fiara miovaova (VFD) miovaova dia karazana motera mpanamboatra fiara izay mitondra maotera mandeha amin'ny herinaratra amin'ny alàlan'ny miovaova ny fatra sy ny tanjaky ny herin'aratra. Ireo pumps ireo dia mampiasa ny fanaraha-maso an-tserasera, izay antsoina koa hoe Variable Frequency Drives na VFD's
Fitaovana miverimberina matetika - Fanaraha-maso hafainganam-pandeha mivezivezy -misondrotra malefaka na hivezivezy matetika
Ho an'ny rindranasa ilaina ny hafainganam-pandeha miovaova, mazàna dia motera AC misy motera Inverter na borosy no ampiasaina. Fitaterana an-tsoratra: Drive VVVF maoderina sy Masinina PM.
Manana ny ekipa fikarohana sy fampandrosoana izahay, izay misy injeniera zokiolona za-draharaha, ary ireo injeniera tanora manana fahaiza-mamorona sy mavitrika.Ny vokatra dia samy mamorona sy maharitra.
Ny mpamily haingam-pandeha azo ovaina dia mety misy maotera elektrika sy mpanara-maso izay ampiasaina hanamboarana ny hafainganam-pandehan'ny môtô.
Betsaka ny mpamily fahita matetika no niavaka noho ny karazana inverter circuitry ampiasaina ao amin'ny VFD. Ny kapila hafainganam-pandehan'i ABB dia mifehy ny hafainganan'ny motera elektrika hifanaraka amin'ny lahasa eny an-tànana, mitsitsy hery ary manatsara ny hatsaram-panahy.
Ny fangatahana fiara miovaova be amin'ny HVAC Systems, ny fantsom-pifandraisana miovaova ho an'ny dummies, ny fizaran-tany miovaova be dia be, izay mifehy ny herin'aratra, ary ny herinaratra ary matetika.
20 Hp Vfd Vidiny
Vidiny 7.5 kw vfd
Dingana iray miovaova fatratra
30 hp vfd vidiny
vfd ho an'ny motor 2hp 3 phase
5 Antony hisafidianana anay
1.Wa manome vokatra avo lenta sy ambany.
2.Ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia an-tserasera mandritra ny andro ary mihaino ny serivisy aorian'ny varotra.
3.Manana ekipa fikarohana sy R&D manokana izahay ary mamorona.
4.Ny vokatra amidy dia amidy any an-trano sy any ivelany ary azo atokisana.
5. Izahay dia orinasa iray izay manana traikefa famokarana an-taonany maro, ary mandritra ny taona maro ny traikefa amin'ny famokarana dia hanome anao fotsiny ny haingam-pandeha miovaova.
Raha manana fanontaniana ianao dia afaka mifandray aminay ihany koa, dia ho faly hanampy anao izahay!